News Archives - Page5of 336 - Myanmar Fire Services Department
Vehicle fire at Botahtaung township, Yangon
editor | Jan 7, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On6Jan, at about 17 40,a22 wheel container truck caught fire on the Maharbandula bridge, No3ward, Botahtaung township, Yangon region. It was investigated that the fire was caused by the spark coming from the failed starter and spread to the wiring system of the...
Accident of cement stacks drop in the warehouse, Kyaukphyu township, Rakhine state
editor | Jan 6, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
On5Jan, at about 15 30, the cement bags stacks in the Kyantaingaung warehouse located at the Kyaukphyu township, Rakhine state accidentally collapsed while the workers were withdrawing the bags from the rack. At 16 30, the information was reported and 14 fire...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ မင်္ဂလာအောင်မြေ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်မျိုးအောင်လမ်းတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jan 5, 2021 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၄.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၄၀ အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ မင်္ဂလာအောင်မြေ (၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်မျိုးအောင်လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၉၄)နေ အိမ်ရှင် ဦးသန့်ဇင်လတ်၏ (၂၀x၂၄)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ အုတ်ညှပ် (၂)ထပ်တိုက်နေအိမ် အိပ်ခန်းတွင် Power Bank အားသွင်းထားရာမှ အပူလွန်ကဲပြီး...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာ(၂)လမ်း၊ “အောင်မင်္ဂလာသီရိဆွမ်းလောင်းရုံ”တ� ....
၄.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၀၃ ၁၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာ(၂)လမ်းတွင် တာဝန်ခံ ဒေါ်ရီရီမွန် ၏ (၁၈x၁၈)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း(၁)ထပ် “အောင်မင်္ဂလာသီရိဆွမ်းလောင်းရုံ”တွင် ထင်းမီးဖိုဖြင့် ဆန်ပြုတ်တည်ပြီး...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ရှောလီဝိုင်းအုပ်စု၊ အောင်သိဒ္ဓိရပ်ရှိ ငါးရံ့အင်းလုပ်ကွက်ဟောင်း တွင်းနံ ....
editor | Jan 4, 2021 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၃.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၂ ၄၅ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ရှောလီဝိုင်းအုပ်စု၊ အောင်သိဒ္ဓိရပ်ရှိ ငါးရံ့အင်းလုပ်ကွက်ဟောင်းတွင် ဦးသူရအောင် နှင့် ဦးဇော်ဇော်တို့ (၂)ဦးသည် တွင်းအနက်(၁၅)ပေခန့်တွင် တွင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေစဉ် တွင်းနံရံသဲမြေသားများ...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ပေါင်းတလည်-ဝက်ပုတ်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၃/၆)နှင့် (၁၃/၇)ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်� ....
editor | Jan 4, 2021 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၃.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ ၁၂ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ ပေါင်းတလည်-ဝက်ပုတ်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၃/၆)နှင့် (၁၃/၇)ကြားတွင် ပေါင်းတလည်ဘက်မှ ဝက်ပုတ်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးချစ်ကို မောင်းနှင်သည့် ထော်လာဂျီယာဉ်သည် သဲကုန်းချောင်းမှ သဲများတင်ဆောင်ပြီး...
Page5of 336« « Previous...34567...102030...Next »